जेल र कैदीबारे गोप्य तथ्य सार्वजनिक गरी आर्किटेक्टले जितिन् प्रख्यात ‘पुलित्जर पत्रकारिता पुरस्कार’ - Engineers Post
इन्जिनियर्स पोस्ट June 29, 2021
लाइसेन्स प्राप्त एक आर्किटेक्टले प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कार जितेकी छन् । आफ्नो विधाभन्दा बाहिर रहेर अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टिङ गर्दा आ.एलिसन किलिङले संसारकै प्रतिष्ठित ‘पुलित्जर पुरस्कार’ जितेकी हुन् । बेलायतमा जन्मेकी एलिसन रोटर्डामकी आर्किटेक्ट हुन् । उनीसहित बजफिड न्युजका रिपोर्टर मेधा राजागोपालन र क्रिस्टो बसचेकले पनि पुलित्जर अवार्ड जितेका हुन् ।
आ. एलिसनसहित तीनै रिपोर्टरले चीनको सिनजियाङ प्रान्तमा निर्मित मुस्लिम अल्पसंख्यकबारे कथाको एक सिरिज बनाएका थिए । उक्त सिरिजमार्फत उनीहरूले जेल र कैदीबारे गोप्य तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।
चिनियाँ सरकारले बनाएको उक्त जेलमा राखिएका पूर्वकैदीहरूसँगको अन्तर्वार्ता र जेलभित्रको अवस्थाबारे उक्त सिरिजमा तयार गरिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धदेखि हालसम्मका कयौं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायहरूलाई उक्त जेलमा कैदी बनाएर राखिएको आ.एलिसनको रिपोर्टिङले खुलाएको छ । रिपोर्टिङका क्रममा उनले २ सय ६० संरचनाहरू सन् २०१७ देखि २०२० को अन्तरालमा बनेको पाइएको छ ।
ओपन टेक्नोलोजीको सहयोगमा सञ्चालित उनको रिपोर्टिङको सिरिज बजफिडमा छापिएको छ । चार भागमा विभाजित उक्त सिरिज २०२० अगस्टदेखि प्रकाशित हुँदै आएको थियो । अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूका लागि करिब एक सयभन्दा बढी भिन्दाभिन्दै क्याम्प बनाइएको आ. एलिसन र उनको टिमले पत्ता लगाएको थियो ।
अर्बन प्लानिङमा लामो अनुभव भएकी आ.एलिसनले जेलको आर्किटेक्चरल विशेषता र ज्ञानबारे थाहा भएकोले रिपोर्टिङथालेको बताएकी छन् । ‘म संसारका आर्किटेक्चरभित्र लुकेका विभिन्न कथाको खोजीमा थिएँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘सोही क्रममा मैले नक्सा र स्याटेलाइटमार्फत चीनको यस आर्किटेक्चरमा अनुसन्धान थालेको थिएँ । त्यहाँ सेन्सर लगाइएको थियो । अन्ततः लामो अनुसन्धानपछि अपेक्षाभन्दा माथिका कथाहरू भेटेँ ।’ जेलभित्रको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आफूले ५ लाखभन्दा बढी साना–ठूला क्याम्पहरू त्यहाँ देखेको उनले बताएकी छन् ।
आ. एलिसनले क्याम्ब्रिज र अक्सफोर्ड ब्रुक्सबाट आर्किटेक्चरको पढाइ पूरा गरेकी हुन् । उनले लन्डनका कयौं आर्किटेक्चरल डिजाइन र अर्बन डिजाइनमा काम गरेकी छन् । सन् २०१० मा उनले किलिङ आर्किटेक्टस् स्थापना गरेकी थिइन् । जसको उद्देश्य संसारभर रहेका आर्किटेक्चरभित्रका विभिन्न सामाजिक मुद्दा, निगरानी र बसाइसराइ आदिबारे खोज गर्नु रहेको छ ।
सन् १९७० मा पुलित्जर पुरस्कार स्थापना भएको मितिदेखि हालसम्म जम्मा ७ आर्किटेक्चर आलोचकहरूले मात्र पुलित्जर पुरस्कार जितेका छन् । –एजेन्सी